The 2020 fellowship theme is on Human Rights in Burma.
Pictured: Rohingya children; photo originally taken by UUSC partner Fortify Rights.
***The Call for Proposals for the 2020 UUSC Human Rights Innovation Fellowship is now closed. Learn about the winning project here!***
UUSC invites letters of interest (maximum of two pages) from organizations for projects that align with our Protecting Human Rights in Burma initiative, which focuses on partnering with locally-led grassroots groups to protect the rights of ethnic and religious minorities in Burma. The specific focus of the Innovation Fellowship this year is Collaboration on the Right to Belonging and Inclusion in Burma.
This year, UUSC invites applications from two or more organizations collaborating to protect the right to belonging and inclusion in Burma. Eligible projects may involve collaborations between human rights organizations from different ethnic nationalities, religious, or demographic groups, innovative communications strategies aimed at domestic audiences, or ideas to leverage religious networks.
Past Recipients of UUSC’s Innovation Fellowship
SKYLIGHT ENGAGEMENT – 2019
Skylight Engagement,ahuman rights media organization is piloting an innovative “virtual accompaniment” model for human rights defenders in Guatemala. The theme of the 2019 UUSC Human Rights Innovation Fellowship was “The Right to Safety in the Northern Triangle of Central America,” in alignment with UUSC’s Central American Migrant Justice Initiative. The virtual accompaniment model, called Virtual International Volunteer Exchange (VIVX), will evolve existing models of human rights accompaniment by connecting grassroots communities to international networks using technology and social networks. VIVX will result inaglobal advocacy network that is designed to increase protection for human rights defenders. For this pilot project, Skylight Engagement will create video profiles of two human rights defenders that will be shared through an online recruitment tool. Virtual accompaniers will be connected with the Guatemalan human rights defenders and will use their networks to sound alerts in social media, in-country embassies, government institutions and UN representatives, raising the political and moral stakes. The goal of VIVX is to protect the lives and ongoing work of human rights activists so that they can feel secure staying in their communities and continuing their work. It is also expected that VIVX will increase the awareness of the virtual accompaniers about the human rights context in Guatemala and center human rights in the national and international dialogue.
ORGANIZED COMMUNITIES AGAINST DEPORTATIONS (OCAD) – 2018
THE LOWLANDER CENTER – 2017
NATIONAL DOMESTIC WORKERS ALLIANCE – 2016
PARTNERS FOR URBAN KNOWLEDGE, ACTION AND RESEARCH – 2015
The focus of the 2015 Human Rights Innovation Fellowship was the human right to water, and the winner was Partners for Urban Knowledge, Action and Research (PUKAR). The grant fundedavital water access survey in Mumbai’s Mandala slum, coordinated by PUKAR’s Youth Fellowship Program. This independent youth-driven research collective focuses on issues of urbanization anchored in community-based participatory research. (In Hindi one meaning of pukaris “a clarion call.”) The PUKAR collective encourages disenfranchised youth in Mumbai to learn through training and experience about how to conduct valid social science research, followed by support in how to use that knowledge to produce meaningful environmental change in their community.
ယူယူအက်စ်စီ လူ့အခွင့်အရေး တီထွင်ဆန်းသစ်ဖော်ဆောင်မှု မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်း အစီအစဥ်
ယူယူအက်စ်စီ လူ့အခွင့်အရေး တီထွင်ဆန်းသစ်ဖော်ဆောင်မှု မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ် ဟူသည် လူ့အခွင့်အရေးနယ်ပယ်တွင် တီထွင်ကြံဆမှုအသစ်များ ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ပျိုးထောင်လုပ် ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မျှဝေဖြန့်ကျက်ခြင်း တို့ဖြင့် နည်းစနစ်ကျ သော အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း (ရန်ဖန်ရန်ခါ အကျိုးအမြတ် အတွက် မဟုတ်သော၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ဟုရည်ညွှန်းသည်) ကို တစ်နှစ်တာ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၂၅,၀၀၀ ပေးအပ်သည့် အစီအစဥ်ဖြစ်သည်။ ယင်းတီထွင်ကြံဆမှုအသစ်များသည် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူ ဟာအသစ်များ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ဥပဒေရေးရာ မဟာဗျူဟာများ၊ အရွေ့ဖြစ်ပေါ် အောင် ဖော်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများ၊ နည်းပညာ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးရာ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းများ၊ အသစ်ထူးခြားသော လက်တွေ့အသုံးပြု သုတေသနများ၊ ကော်ပို ရိတ် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု တိုးတက်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ သို့မဟုတ် အခြား ချဥ်းကပ်မှုအသစ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။ အခွင့်အရေးကိုအခြေခံသော၊ အကျိုးသက်ရောက်ခံရသည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှ တိုက်ရိုက်ဦးဆောင်သော နှင့် သစ်လွင်သော၊မတူကွဲပြားသော၊အချိန်နှင့်အလိုက်ဖြစ်သော ဖြေရှင်း နည်းများကို အဆိုပြုသည့် အဆိုပြုလွှာများသည် ရန်ပုံငွေရရှိအောင်မြင်မည်ဖြစ်သည်။
ယူယူအက်စ်စီ ၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေးလူနည်းစုများ၏ အခွင့်အရေးများကို အကာ အကွယ်ပေးရန် ဒေသခံလူထုများဦးဆောင်သည့် အခြေခံအုတ်မြစ်လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုများနှင့် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဦးတည်သည့် Protecting Human Rights in Burma မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု နှင့် ကိုက်ညီသော စီမံကိန်းများအတွက် အဖွဲ့အစည်းများထံမှ (အများဆုံး နှစ် မျက်နှာစာရှိ) စိတ်ဝင်စား ကြောင်းအဆိုပြုစာကိုလျှောက်ထားရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ယခုနှစ်အတွက် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမိတ်ဖက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အဓိက ဦးတည်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ရပိုင်ခွင့်များပိုင်ဆိုင်ခွင့် နှင့် အကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်ခွင့်တို့ အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယူယူအက်စ်စီ၏ mission and vision မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များ နှင့် ကိုက်ညီ သည်။
ယူယူအက်စ်စီ၏ မိတ်ဖက်ပါတနာလက်တွဲခြင်း စံပုံစံ နှင့်အညီ အကျိုးသက်ရောက်ခံရသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဝင်များမှ ဦးဆောင်သည်။
ယခုနှစ်အတွက် ယူယူအက်စ်စီသည် နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသောအဖွဲ့အစည်းများမှ ပူးပေါင်း ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရပိုင်ခွင့်များပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်ခွင့်တို့ကို အကာအ ကွယ်ပေးမည့် အဆိုပြုလျှောက်ထားလွှာများကို ခေါ်ယူလျက်ရှိသည်။ လျှောက်ထားနိုင်သော စီမံ ကိန်းများတွင် မတူကွဲပြားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနိုင်ငံသားများ၊ မတူညီသော ဘာသာရေး သို့မဟုတ် နောက်ခံအနေအထားရှိအုပ်စုများမှ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ပြည်တွင်းပရိသတ်များကို ဦးတည်သည့် တီထွင်ဆန်းသစ်သော ဆက် သွယ်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာများ သို့မဟုတ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာကွန်ယက်များအား သဟ ဇာတဖြစ်အောင်ထိန်းညှိပေးမည့် အတွေးအခေါ်အသစ်များ စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော အ ကြောင်းအရာများပါဝင်သည်။
မကြာခဏမေးမြန်းလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ Frequently Asked Questions
ယူယူအက်စ်စီ၏ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ်၏ ယခင်လက်ခံရရှိဖူးသူ များ
SKYLIGHT ENGAGEMENT – ၂၀၁၉ ခုနှစ်
Skylight Engagement သည် ဂွါတာမာလာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအ တွက် တီထွင်ဆန်းသစ်သော “Virtual accompaniment (ထိတွေ့၍မရသော/ပုံစံဖန်တီးထား သော အတူအဖော်ြပုလိုက်ပါလုပ်ဆောင်ခြင်း)” ပုံစံတူ စီမံကိန်းကို ရှေ့ပြေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင် နေသည့် လူ့အခွင့်အရေး သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ယူယူအက်စ်စီ လူ့ အခွင့်အရေး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ်၏ အကြောင်းအရာသည် ယူယူ အက်စ်စီ၏ Central American Migrant Justice Initiative. ခေါ် အမေရိကန်အလယ်ပိုင်း ရွှေ့ပြောင်း သူများ တရားမျှတမှု ဖော်ဆောင်ချက် နှင့်အညီဖြစ်သည့် “အမေရိကအလယ်ပိုင်း၏ မြောက်ပိုင်း တြိ ဂံမြေအတွင်း ဘေးကင်းလုံခြုံခွင့်” ဖြစ်သည်။ ထိတွေ့မရသော/ပုံစံဖန်တီးထားသော နိုင်ငံတကာဆိုင် ရာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖလှယ်ခြင်း (Virtual International Volunteer Exchange – VIVX) ခေါ် ပုံစံ ဖန်တီးထားသော အတူအဖော်ပြုလိုက်ပါရှိပေးခြင်း မော်ဒယ်လ်သည် နည်းပညာများနှင့် လူမှုကွန် ယက်များအားအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အခြေခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို နိုင်ငံတကာကွန်ယက်များ နှင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းမှတဆင့် လူ့အခွင့်အရေး အတူအဖော်ပြုလိုက်ပါလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၏ ရှိ ပြီးသား မော်ဒယ်လ်များကို အသွင်သစ်ကူးပြောင်းစေမည်ဖြစ်သည်။ VIVX သည် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအတွက် အကာအကွယ်ပေးခြင်းကို တိုးမြှင့်စေရန်ရေးဆွဲဖော်ဆောင် ထားသော တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းရုံးညှိနှိုင်းလှူံ့ဆော်ရေး ကွန်ယက်ကို ရရှိဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ် သည်။ ဤရှေ့ပြေးစမ်းသပ်ချက်စီမံကိန်းအတွက် Skylight Engagement သည် အော်န်လိုင်း လူစု ဆောင်းခြင်း ကိရိယာမှတဆင့် မျှဝေမည့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူနှစ်ဦး၏ အထုပ္ပ တ္တိအကြောင်းဗွီဒီယိုရုပ်သံ ကိုဖန်တီးမည်ဖြစ်သည်။ ပုံစံဖန်တီးထားသည့် အတူအဖော်ပြုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်သူများကို ဂွါတာမာလာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများနှင့် ချိတ်ဆက် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့၏ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုကာ လူမှုကွန်ယက်သတင်းမီဒီယာများ၊ နိုင်ငံတွင်းရှိ သံရုံးများ၊ အစိုးရအသင်းအဖွဲ့များ နှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များ တို့တွင် အသိပေးဆော် သြမှုများလုပ်ဆောင်ပြီး နိုင်ငံရေးနှင့် စာရိတ္တပိုင်းကျင့်ကြံလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးကိုမြှင့်တင် ဖော်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်သည်။ VIVX ၏ မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည် လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ အနေဖြင့် ၄င်းတို့၏နိုင်ငံအတွင်းဆက်လက်နေထိုင်ပြီး ၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းများဆက် လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းခံစားနိုင်စေရန်အတွက် ၄င်းတို့ ၏ ဘဝများနှင့်ဆက် လက်လုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းများကို အကာအကွယ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ VIVX သည် ဂွါတာမာ လာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေးနောက်ခံအနေအထားအကြောင်း ပုံစံဖန်တီးထားသော အတူအ ဖော်ပြုလိုက်ပါလုပ်ဆောင်သူများ၏ အသိအမြင်နိုးကြားမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတ ကာအဆင့် ဆွေးနွေးမှုများတွင် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းဗဟိုပြုလာနိုင်စေရန်တို့ကိုလည်း မျှော် မှန်းသည်။
ORGANIZED COMMUNITIES AGAINST DEPORTATIONS (OCAD) – ၂၀၁၈ ခုနှစ်
၂၀၁၈ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ဦးတည်ချက်သည် “ရာဇ ဝတ်မှုချမှတ်ခြင်းကို ခုခံတွန်းလှန်ခြင်း” ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေအနိုင်ရရှိခဲ့သူမှာ Organized Communities Against Deportations (OCAD) (အိုစီအေဒီ) ဖြစ်ကာ ချီကာဂိုမြို့တော်၏ ဂိုဏ်းသမားဒေတာအချက် အလက်များအား တိုက်ဖျက်ရန်ကျိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်အထောက်အပံ့ရရှိခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်သူ များမရေတွက်လျှင် လူနာမည် အချို့ပေါင်း ၁၂၈,၀၀၀ ပါဝင်ခဲ့သည့် ဒေတာဘေ့စ် (The city’s gang database, which includes some 128,000 names) ကို ချီကာဂိုမြို့နယ်ရဲအရာရှိများမှ လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတွင်း စုစည်းဖော်ဆောင်ထားခဲ့သည်။ အခွင့်အရေး စည်းရုံးလှူံ့ဆော်သူများ၏ပြောကြား ချက်အရ ယင်းဒေတာဘေ့စ်သည် တိကျမှုမရှိ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီမဖြစ်ပဲ လူမျိုးရေးရာအရ ပစ် မှတ်ထားထားခြင်းဖြစ်ကာ လူမည်းများနှင့် လာတီနို လူမျိုးများ အဆမတန်ပါဝင်နေလျက်ရှိသည်။ အိုစီအေဒီ၏ ဂိုဏ်းသမားအချက်အလက်ဒေတာဘေ့စ် အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်မှုသည် ဒေသခံလူထုများအနေဖြင့် အကြောက်တရားကင်းစွာရှင်သန်နေထိုင်နိုင်သည့် လူ​နေမှုအသိုင်းအဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဒေသတွင်းအဆင့်၌ အခြေခံလူနေမှုအဆင့် အစီအစဥ် များကျင်းပလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် မူဝါဒရေးရာဆောင်ရွက်ချက်များစသည်တို့မှတဆင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလများ၊ မိသားစုများနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ကာ – ငြိမ်းချမ်းသောနားခိုရာ မြို့တော်သယဟု ကိုယ်၌အမည်ခံယူထားသည့် ချီကာဂိုမြို့တော်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းသောနားခိုရာဖန်တီးရန် အဖွဲ့၏ ပိုမို ကျယ်ပြန့်သော ကတိကဝတ်ပြုဆောင်ရွက်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
THE LOWLANDER CENTER – ၂၀၁၇ ခုနှစ်
၂၀၁၇ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ဦးတည်ချက်မှာ “ရာသီဥ တုမှ တွန်းအားပေးသော ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း” ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိအောင်မြင်ခဲ့သူမှာ လူဝီစီ ယားနား၏ ကမ်းနားဒေသတစ်ခုတွင်အခြေစိုက်သည့် အကျိုးအမြတ်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ် သည့် The Lowlander Center မှ “နေရာဒေသနှင့် လူထုအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှု တည်ဆောက်သည့် အနာဂတ်ကို ဦးတည်ရင်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် အစဥ်တစိုက်ပြောင်း လဲနေသော ကမ်းရိုးတန်းနှင့် မြေဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အတူ နေထိုင်ခြင်း” အတွက် လူထုအခြေပြုဖြေရှင်း နည်းများရှာဖွေခြင်းအတွက် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုပရောဂကြောင့် မြေယာတိုက်စားခြင်း နှင့် အခြားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကြုံတွေ့ရာတွင် ရွှေ့ပြောင်းရန်ခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက် များချမှတ်ရသည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် ဖော်ဆောင်ထားသော လိုက်လျောညီထွေဖြစ် ရေးနည်းကိရိယာတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းရန်ပုံငွေကို ချ ထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းအကြောင်း ဤတွင် (Read more about this project.) ပိုမိုဖတ်ရှု ပါ။
NATIONAL DOMESTIC WORKERS ALLIANCE – ၂၀၁၆ ခုနှစ်
၂၀၁၆ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ဦးတည်ချက်မှာ “စီးပွား ရေးဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု” ဖြစ်ပြီး National Domestic Workers Alliance (အန်ဒီဒဘယ်လ်ယူ အေ) မှ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများ၊ နာမကျန်းသူများအား ကူညီစောင့်ရှောက်ပေး သည့် အလုပ်သမားများအတွက် အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ၄င်း၏ “အမျိုးသား အဆင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများ ဟော့လိုင်း” တည်ထောင်ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေရရှိအောင်မြင်ခဲ့ သည်။ ဟော့လိုင်းသည် “သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိပါ” ဟူသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အ တူ အလုပ်သမားပညာပေးရေးအတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သော နည်းကိရိယာများနှင့် အရင်းအ မြစ်များ၊ မိမိကိုယ်ကိုစည့်ရုံးလှူံ့ဆော်နိုင်ရေးအတွက် သင်တန်းများ စသည်တို့ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤစီမံကိန်းနှင့် အန်ဒီဒဘယ်လ်ယူအေ မှဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းများကို ဤတွင် (Read more about this project and the work NDWA is doing.) ဖတ်ရှုပါ။
PARTNERS FOR URBAN KNOWLEDGE, ACTION AND RESEARCH – ၂၀၁၅ ခုနှစ်
၂၀၁၅ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ဦးတည်ချက်မှာ “ရေအ ရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေး” ဖြစ်ပြီး Partners for Urban Knowledge, Action and Research (ပူကာ) မှရန်ပုံငွေအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ PUKAR’s Youth Fellowship Program ၏ပူးပေါင်းမှု ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော မွမ်ဘိုင်းမြို့၏ မန်ဒလာ အောက်ခြေလူထုအတွင်း အရေးပါသော ရေရရှိမှုအ ကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ချက် စစ်တမ်းအတွက် ရန်ပုံငွေချထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလွတ်လပ်သော လူ ငယ်ဦးဆောင်သည့် သုတေသနပေါင်းစုသည် လူထုအခြေပြုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနအ တွင်း အမြစ်တွယ်နေသော မြို့ပြတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်များ အပေါ်အထူးပြုသည်။ (ဟင်ဒီဘာသာတွင် pukaris ၏ အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုမှာ “အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အထူးဖော်ထုတ် တောင်းဆိုမှု” ဟူ၍ဖြစ်သည်။) PUKAR ပေါင်းစုသည် မွမ်ဘိုင်းမြို့ရှိ အခွင့်အရေးမဲ့ လူငယ်များ အ နေဖြင့် ခိုင်မာသောလူမှုသိပ္ပံသုတေသနများအား မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ဟူသည့် သင်တန်းများနှင့် အတွေ့အကြုံများမှတဆင့် သင်ယူရန်အားပေးခဲ့ကာ၊ ယင်းမှရရှိသောအသိပညာဗဟုသုတများကို ၄င်းတို့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ် စေရန် မည်သို့အသုံးပြုမည်ကိုအထောက်အပံ့ပေးခဲ့သည်။ ပူကာမှ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမိတ်ဖက် ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ်မှတဆင့် ဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းများအကြောင်း ဤတွင် ဖတ်ရှုပါ။